Xaqiiqooyin U Gaar Ah Filimka Classic Ah Qayamat Se Qayamat Tak | Filimside –
Xaqiiqooyin U Gaar Ah Filimka Classic Ah Qayamat Se Qayamat Tak
Aug 8, 2017 - 7 Jawaabood
Qayamat Se Qayamat Tak waa mid ka mid ah aflaanta jaceylka ee fanka Hindiya wax weyn ka badalay sidoo kalena lagu muujiyay in dhalinta Hindiya fanka miisaan ku yeelan karaan.
Qayamat Se Qayamat Tak waxaa Director ka aha Mansoor Khan halka uu maal galiyay Nasir Hussain waxaana lagu soo caan bixiyay Aamir Khan iyo Juhi Chawla.
Qayamat Se Qayamat Tak waxaa la daawaday 29-kii April 1988 waana filim Super Hit noqday oo ilaa haatan jecel yihiin dadka xiiseeyaan aflaanta Hindiga ah.
Fadlan hoos kaga bogo filimka Qayamat Se Qayamat Tak iyo xaqiiqooyinkiisa gaarka ah:
Xaqiiqada 1-aad: Qayamat Se Qayamat Tak waa filimkii ugu horeeyay ee lagu bilaabay nidaamka xayeysiinta hada filimada loogu sameeyo.
Waxaa meel walbo laga dhajiyay qoraalo dadka soo jiidanayo sida “Waa kuma Aamir Khan?…..Weydii gabadha albaabka ku dhagan degan”
Sidoo kalena mootooyinka bajaajka ama tug tuga oo dhan waxaa lagu dhajiyay sawirada Aamir Khan weliba suuq geyntaan Aamir isaga ayaa sameeyay oo magaalo walbo tagay xiligaas.
Xaqiiqada 2-aad: Dhamaadka heeska Super Hit-ka noqday Papa Kehte Hain Aamir wuxuu gabbar ayuu u dhawaanaa wuxuuna la qaadaa aankhon mein jaadu qof kale ma ahan gabadhaan waa Reena Dutta xaaskii hore Aamir.
Aamir iyo Reena markaas ayay is guursadeen si lama filaan ah ayay goobta filimkaan ku timid lagu duubayay sidoo kalena si lama filaan ah ayay muuqaal kooban ugu yeelatay.
Xaqiiqada 3-aad: Marka filimkaan Hit noqday si uu mudo dheer tiyaatarada u saarnaado kooxda cajaladaha Mumbia qeybiyaan waxay la imaadeen suuq geyn hirgashay oo ah qofkii iibsado 7 ilaa 8-tikit in la siinayo kaarto ay ku sawiran yihiin Aamir Khan iyo Juhi Chawla waxayna noqotay siyaasad siweyn u hirgashay.
Xaqiiqada 4-aad: Aamir Khan wuxuu qabsaday Hindiya oo dhan waana markii loo bixiyay Lover Boy oo ilaa haatan mararka qaarna loogu yeero.
Xaqiiqada 5-aad: QSQT waa filimkii ugu horeeyay ee Alka Yagnik ka heesto hal Album oo dhameestiran.
Xaqiiqada 6-aad: Xafladii Filimfare Awards ee markii 34-aad la qabtay wuxuu filimkan ka helay 7-biladood asigoo u tartamay 10-biladood, sidoo kalena abaal marinta National Film Awards ayaa 2-biladood lagu qaatay.
Fadlan hoos kaga bogo jadwalka hoose sida QSQT loogu qaatay Filmfare Awards iyo National Film Awards:
Xaqiiqada 7-aad: Juhi Chawla filimkaan tijaabadiisa marka laga qaadayay qofka wareestay tijaabadana ka qaaday wuxuu ahaa Aamir Khan, laakiin marnaba ma aysan ogeyn inuu ahaa atooraha filimka ay jaceyl kula jili doonto.
Xaqiiqada 8-aad: Filimka QSQT waxaa dib loo sameeyay asigoo Telugu ah waxaana loo bixiyay magaca Akkada Ammayi Ikkada Abbayi (1996) waana filimkii uu kusoo caan baxay Pawan Kalyan.
Sidoo kale sanadii 1993 filimkaan asigoo Bangladesh ah ayaa dib loo sameeyay wuxuuna watay magaca Keyamat Theke Keyamat.
Waxaa Aqriyay: 1,680
wwwwwwwww waa xasuus cajiib ah mr Aamir iyo juhi waa film aan marna laga xiisa dhaceynin ilov you
khalid cade says:
inaba caadi mahan qsqt maxaa yelay waa filim quluubta dadka gilgiley xambarsana fariin inbadana cajaib mida xigta waa filimada uu ku fano amir midka hogaamiyaha u ah mr khan guuuuul
bro fadlan nin aad ugu xeran flmside.
codsi aya wata ina aad please no so gubisaan Xaqiiqoyinka u gaar ah Slumdog Millionaire, filimkaas iyo sida uu ku noqday film caalami iyo lacagaha lagu qarasha gareyay
cabdirashiid pertaap sing says:
waad mahadasan thn filinside aad yo aad.
qayamat se qayamay tak war bixin aanaan ogayn ayaa naga sii seen.
inj haadi says:
waa film xasuus kuleh dadkii shaleemada daawan jiray 2000 ilaa 2009kii best film qsqt
Foosi Brown says:
Best Male Debut And
Best Actor Ayuu Ku QaataY
soY dinkii Lahaa qof saas sameeyay
ma jiro hrithik Roshan moyaane
in Kahona Piar hai wa sidee film side
ma liiskan pa qaldan mise wx klaa jira
best actor kuma qaadan ufiirso national award ayuu ku qatay best actor ee filmfare ma aha si fiican u fiiri best male debute kaliya ayu ku gulaystay